पाँच प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै तल्लो मोदी–१
admin 8 months ago 119
पुस ९, पर्वत ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ मा सञ्चालित तल्लो मोदीखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाका शेयर धनीलाई पाँच प्रतिशत लाभांश वितरण गरिने भएको छ ।
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । कूल पूँजीको रू. पाँच करोड ७५ लाख वितरण गर्ने कम्पनीले बताएको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय भएको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
पर्वतमा १० मेगावाटको तल्लो मोदीबाट २०६९ मङ्सिरदेखि विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन शुरू भएको हो । साधारणसभामा आयोजनाका अध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेको छ वर्षमा लक्ष्यअनुसार नै आम्दानी दिएको दाबी गरे ।
आव २०७२÷७३ मा बाढीका कारण साढे चार महीना विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा सो आवको उत्पादन निकै कम भए पनि आयोजनाले बीमा गरेकाले ठूलो क्षति व्यहोर्नु नपरेको बताइएको छ । उक्त आवमा आयोजनाले बीमाबापत रू. १९ करोड सात लाख पाएको थियो ।
अघिल्लो आव २०७२÷७३ मा रू. १४ करोड ७१ लाख आम्दानी भएको आयोजनामा गत आवबाट ७७ प्रतिशत वृद्धि भएर रू. २८ करोड १४ लाख आम्दानी भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आवमा रू. एक करोड ३५ लाख ६४ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीले गएको आवमा रू. चार करोड ८८ लाख ४८ हजार खुद नाफा कमाएको थियो ।
चालू आवको पहिलो तीन महीनासम्म कम्पनीले रू चार करोड १८ लाख ८१ हजार खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा रू. नौ करोड ७१ लाख ३३ हजारको विद्युत् बिक्री गरेको जानकारी दिएको छ ।
उक्त कम्पनीले निकट भविष्यमै तल्लो मोदी–२ सञ्चालन गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ । अहिलेको आयोजनाभन्दा तल तल्लो मोदी–२ निर्माण गर्ने र यसका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक गौतमले जानकारी दिए । रासस
बर्षाको समयमा देखिने कुश्मा नगरपालीका ४ स्थित फाप्रे खोलाको मनमोहक झरना ......... फोटो :- सुजन जोशी 106
गुप्तेश्वर गुफा कुश्माको भिडियो डकुमेन्ट्रि 1407
कटुवाचौपारीमा अधिकारी बंश प्रतिष्ठान 233
क्यान्सर पिडीत गौतमलाई छिमेकी र गाउँबासीले गरे आर्थिक सहयोग 102